Inguva inguva yawakanakidzwa nemutambo wetambo tambo pamutengo unodhura | Ndinobva mac
Isu tese tinoziva kuti Apple zvishongedzo zveiyo Apple Watch iwo akatemerwa mutengo mune zvimwe zviitiko zvinorambidza kune vashandisi madoko Isu tatoziva kuti kutenga Apple Watch Sport kwatoita kuti tibhadhare nezve400 euros, asi kuti isu tinogona kuwana kubhadhara iyo mari chero nguva yakatarwa hazvireve kuti gare gare tinogona kupa 59 euros yemitambo yakasungirwa tambo iyo Apple yakaisa pakutengesa mwedzi mishoma yapfuura muchirimo.
Muchikamu chino ini ndinokuratidza imwe sarudzo yakaenzana neiyo Sports Loop iyo kana tikavatarisa nokungwarira, vane chimiro chakafanana uye pakutanga kuaona zvinhu zvinoshandiswa ndezve zvakafanana mhando.
Tambo dzatiri kutaura nezvadzo dzine nzira imwecheteyo yekusunga seyapakutanga uye huwandu hwemavara uyo mutengesi anotipa hwakafanana zvakafanana, kushaya mamwe mavara uye kuwedzera sarudzo dzisipo muApple.
Izvo zvakare zvinogadzirwa nemweya wekufema wakarukwa nylon unovaita iwo akakodzera kumitambo. Kuvhara kunoitwa nenzira yemhando yakasarudzika yevelcro yakafanana neiyo Apple pachayo. Kubva pane zvatakaona mukushambadzira, chimiro chakanyanya kufanana, asi kusvika iwo atakatenga haasvike kwatiri, hatigone kupa mutongo wedu wekupedzisira.
Mutengo waro wakasimba kwazvo uye ndewokuti panzvimbo yemakumi mashanu emaeuro ayo Apple anobvunza, mutengesi uyu anozvipa kwatiri kwe18,60 euros. Ivo anowanikwa mune ese ari maviri saizi, kune ese ari maviri 38mm uye 42mm Apple Watch. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve tambo tambo iyo yatiri kutaura nezvayo, unogona kushanyira iyo next link uye kana iwe uchida kuzvienzanisa neiyo yeApple iyi imwe.
Iyo zvirokwazvo inzira yakachipa yekupa yako Apple Watch chimiro chitsva pasina kuenda kuburikidza neApple bhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Inguva inguva yawakanakidzwa nemutambo wetambo tambo pamutengo unodhura